Etu esi enweta nchekwa EFS na LG G2 | Gam akporosis
LG G2, otu esi enweta nchekwa EFS (ROOT)
Francisco Ruiz | | Gam akporo Root, LG, Nche, Nkuzi
Na ọzọ nkuzi m ga-akụziri gị esi ndabere EFS nchekwa na ọdụ anyị dị egwu site na LG the LG G2 na ụdị ya niile na ụdị ya.
N’ụzọ ezi uche dị na ya, iji mepụta nchekwa nchekwa EFS nchekwa ahụ, anyị ga - enwerịrị mkpofu nke Iweghachite gbanwetụrụ, ma obu TWRP ma ọ bụ Nchekwa ClockworkMod.
1 Gini mere m ji kwado nchekwa EFS?
2 Olee otú m ndabere si TWRP?
3 Kedu otu m ga - esi mee ya na ClockworkMod Recovery?
Gini mere m ji kwado nchekwa EFS?
Ozugbo Mgbanwe gbanwere ọ dị mkpa iji kwado nchekwa ahụ EFS, ihe ndị ọzọ n'ihi na o nwere data dị mkpa dị ka redio nke ọdụ anyị, nke gụnyere data pụrụ iche na-enweghị ike ịfefe dị ka ọnụọgụ anyị IMEI.
Nke a, dị ka m na-ekwu, dị oké mkpa, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị ga-arara onwe anyị nye ịgbanwe Rom, ebe ọ bụ na mgbe ụfọdụ na-egbu maramara usoro ị nwere ike tufuo data a niile dị mkpa na na-enye anyị ohere, ihe ndị ọzọ, nwere njikọta netwọk.
Olee otú m ndabere si TWRP?
Ọ bụrụ na anyị ahọrọla nhọrọ iji wụnye ihe a Mgbanwe gbanwere, na otu nhọrọ nke TWRP Iweghachite anyị ga-ahụ nhọrọ kwekọrọ na ya iji chekwaa data nke folda niile EFS. Naanị anyị ga-aga nhọrọ ahụ ma mee ya. Anyị nwere ike ịchọta ya n'ime nhọrọ nke ndabere.
Ọ bụrụ na ị nwere TWRP tupu mbipute 2.6.3.2 ị ga-agbaso otu usoro ahụ dị ka nke CWM Iweghachite ebe ọ bụ na gị mbipute ị gaghị ahụ nhọrọ EFS ndabere.
Kedu otu m ga - esi mee ya na ClockworkMod Recovery?
Ọ bụrụ na ị wụnye ndị CWM Iweghachite anyị ga budata ZIP a ma gbaa ya ọsọ ka anyị ga-etinye mod ma ọ bụ a Esie nri rom:
Wụnye zip si sdcard
Anyị na-ahọrọ LG_G2_Backup_EFS.zip ma kwenye na ntinye ya.
Reboot usoro ugbu a
Ugbu a, anyị ga-enyocha ya na ụzọ / sdcard // EFS_Backup / anyị nwere ZIP kwekọrọ na nke nwere data niile nke nkebi EFS nke anyi LG G2.
Nlele a dị oke mkpa iji mee usoro ọ bụla anyị gbasoro, site na TWRP ma obu site na CWM Iweghachite.
Ugbu a iji rụchaa data ahụ ana m enye gị ndụmọdụ ka ị debe otu zip ahụ na gị PC dị ka igwe ojii dị ka ọ nwere ike ịbụ DropBox ma ọ bụ ọrụ ndị yiri ya.
Iji weghachite nkwado ndabere, dị nnọọ detuo zip na sdcard na site na mgbake gbanye ya dị ka a ga - asị na ọ bụ Rom ya esiri ya.
Ozi ndị ọzọ - Etu esi wụnye mgbake gbanwere na LG G2
Budata - Faịlụ iji Flash si Iweghachite
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG G2, otu esi enweta nchekwa EFS (ROOT)
Sute (@okeonyekwere) dijo
Enyi, EFS mgbake faịlụ m nwere ike ịhụ ya na ihe ọ bụla omume na-enwe ike iji wepụ ya na ekwentị na-azọpụta ya na mpụga nke ya, m na-ahụ ya na moo mgbake na amaghị m ma ọ bụrụ na ọ na-ọma zọpụta Amaghi m ihe m ga - eweta, o na - aputa ibanye ya .. O putara, olee otu m g’esi mee ya?
Zaghachi Sute (@jose_marzella)
ndewo, ọ bara uru ịme ya na S4?
Zaghachi Matias "TUTE" Orozco
Ndewo Francisco. mgbe na-egbu maramara a rom m g2 anaghị jikọọ na kọmputa. O nwere ike buru na ehichapuru folti efs? Ọfọn, anaghị m ahụ ya ebe ọ bụla.
M ga-enwe ekele maka ndụmọdụ gị. DAALỤ…
Nwụrụ Anwụ na-akpalite 2 na-enweta nsụgharị ọhụrụ ma nwee nke pụrụ iche akwadoro maka ekeresimesi
Magus the Gesture Launcher dị ugbu a maka nbudata